पर्याप्त र गहिरो निद्राका लागि | सुदुरपश्चिम खबर
किनभने हामी पर्याप्त निदाउन सकेकै छैनौं । सामान्यतः हामीले सातदेखि आठ घण्टासम्मको निद्रा लिनुपर्छ। तर, समयले मात्र पुग्दैन । निद्रा गहिरो हुनुपर्छ । यदि गहिरो निद्रा लिइएन भने के हुन्छ ?
३. सुत्नुअघि त्यस्ता कुराहरू सोच्नु हुँदैन, जसले मनलाई दुःखी तुल्याउँछ । अक्सर मानिस ओछ्यानमा पल्टिएर मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्छन्, विगतका गल्तीहरू सम्झिन्छन्, भविष्यका बारेमा कल्पना गर्छन् । यसले पनि निन्द्रा बिथोल्छ । यस्ता कुराहरू सोचेर केही फाइदा छैन । दिनमा शरीर सक्रिय भएको बेला यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसले आफूलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ ।
–काँचो प्याजको सेवन गर्नुपर्छ ।
–सुत्नुअघि मनतातो दूध पिउनुपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार